एनआरएनएमा पन्त भर्सेज आचार्य, कुन देशमा कति मतदाता ? – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० आश्विन २०७७, शनिबार १७:४२ English
एनआरएनएमा पन्त भर्सेज आचार्य, कुन देशमा कति मतदाता ?
निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, २९ असोज । गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नयाँ नेतृत्वका लागि आज मतदात हुँदैछ । नवौं अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनबाट नयाँ नेतृत्वका लागि ४२ पदाधिकारी चयनमा निर्वाचन हुन लागेको हो ।
संघ ८० भन्दा बढी मुलुकमा फैलिएको दाबी गरिएको छ । करिब २६ सय प्रतिनिधिहरुले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान गर्दैछन् । निर्वाचन समितिले मतदाताहरुको अन्तिम नामावली पनि आजै प्रकाशित गर्ने जनाएको छ ।
आज साँझ ५ बजे देखि राति १० सम्म प्रतिनिधिहरुले विद्युतीय मतदान गर्नेछन् । मतदान सम्पन्न भएको एक घण्टाभित्रमा नै मतगणना सुरु हुनेछ । विद्युतीय मतदान भएकाले आज नै सम्पूर्ण नजिता आइपुग्ने छ । संघको नयाँ नेतृत्वका लागि वर्तमान उपाध्यक्षद्वय कुमार पन्त र कुल आचार्य प्यानलसहित चुनावी मैदानमा छन् ।
संघमा राजनीतिक ध्रुवीकरण हावी भएको भन्दै संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले सम्मेलनको उदघाटन कार्यक्रम नै बहिस्कार गरेका छन् ।
दुई पटक संघको उपाध्यक्ष बनेका जर्मनी निवासी कुमार पन्त यसपटक अध्यक्षको दाबेदार हुन् । पन्त समूहलाई नेकपा निकट भनिएपनि उनको समूहका केही उम्मेदवारहरु प्रजातान्त्रिक विचार र स्वतन्त्ररुपमा चिनिएका समेत छन् ।
पन्त समूहबाट ५ उपाध्यक्षमा डा. बद्री केसी (रसिया), हिक्मत थापा (अफ्रिका), सोनाम लामा (अमेरिका), अर्जुनकुमार श्रेष्ठ (बेल्जियम) र धर्मराज अधिकारी (अष्ट्रेलिया) छन् । महिला उपाध्यक्षमा रसिया निवासी सपिलाराज भण्डारीले उम्मेदवारी दिएकी छिन् ।
महासचिवमा बेलायत निवासी प्राध्यापक डा. हेमराज शर्मा पक्का भएको छ । सचिवमा शिवकुमार बरुवाल (बेल्जियम) र मध्यपूर्वका राजेन्द्र कुमार शर्मा (आरके) मध्ये एकलाई उतार्ने प्रयास भइरहेको बताईएको छ ।
पन्त समूहबाट कोषाध्यक्षमा जापानका महेशकुमार श्रेष्ठले उमेद्वारी घोषणा गरेका छन् । सह–कोषाध्यक्षमा लोकप्रसाद दाहाल (बेल्जियम), गोबिन्दप्रसाद गौतम (रसिया) र एसी शेर्पा (अमेरिका) ले दाबी गरेका छन् ।
बेलायत निवासी कुल आचार्य आफ्नो टिमसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । प्रजातान्त्रिक विचारधारका आचार्यको समूहलाई कांग्रेस निकटका रुपमा हेरिएको छ ।
आचार्यको समूहबाट पाँच उपाध्यक्षमा डा. केशव पौडेल (अमेरिका), मन केसी (अष्ट्रेलिया), नरेन्द्र भाट (मध्यपूर्व) र रबिना थापा (अमेरिका)लाई अगाडि सारिएको छ ।
आचार्य समूहबाट महासचिवमा बेल्जियम निवासी जानकी गुरुङ र कोषाध्यक्षमा सोम सापकोटाले उम्मेदवारी दिने भएका छन् ।
एनआरएनए सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार ८१ देशमा एनआरएन फैलिएको भएपनि ४५ देशका प्रतिनिधि मात्रै निर्वाचनमा भाग लिन उपस्थित भएका छन् । एनआरएनएको विधान अनुसार ६ वटा क्षेत्रीय समितिहरु छन् । ती क्षेत्रीय समितिमध्ये सबैभन्दा बढी मत युरोप क्षेत्रीय समितिको छ भने सबैभन्दा कम मत अफ्रिकाको छ ।
६ वटै क्षेत्रका एनआरएनका सदस्यहरुको कुल संख्या ७३ हजार ९५१ हुन्छ । यसबाट सम्मेलनमा तीन हजार ५८ जनाले सहभागिता जनाउन पाउँछन् । आजको सम्मेलनमा करिब २५ सयको हाराहारीमा मात्र सहभागिता छ ।
नवौं सम्मेलनका लागि सबैभन्दा धेरै २८ हजार ७९९ सदस्य रहेको युरोप क्षेत्रका १ हजार १८३ मतदाता छन् ।
त्यसमा पनि १३ हजार ६२९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) बेलायतका मात्रै १७९ मतादाता छन् ।
२ हजार १७५ सदस्य रहेको पोर्चुगलका १२७, २ हजार ३९७ सदस्य रहेको स्पेनका १२५, २ हजार २७ सदस्य रहेको जर्मनीका १२५, १ हजार ६४ सदस्य रहेको डेनमार्कका १०२, २ हजार पाँच सदस्य रहेको बेल्जियममा १३० जना प्रतिनिधि छन् ।
युरोपपछि ११ हजार २७१ सदस्य रहेको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका मतदाता ६४० जना छन् । हङकङमा १००, र मकाउका ७९ जना मतदाता छन् । ८ हजार ६१२ पञ्जीकृत सदस्य रहेको मध्यपूर्वमा ६२० जना मतदाता छन् ।
कतारका १४८, इजराइलका १०६, ओमानका १००, कुवेतका ९८, साउदीका ७१ र बहराइनका ६० जना मतदाता छन् ।
ओसेनियाँ क्षेत्रका अस्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डमा गरी ३०० मतदाता छन् । अस्ट्रेलियामा १७५, न्युजिल्याण्डमा १२५ मतदाता रहँदा उत्तर–दक्षिण अमेरिकाबाट २९७ जना मतदाता छन् । अमेरिकामा १६८ र क्यानेडामा १२९ जना मतदाता छन् ।
अफ्रिकाका विभिन्न ६ देशबाट भने जम्मा १८ जना मतदाता छन् ।
२९ आश्विन २०७६, बुधबार ०९:१३ मा प्रकाशित